XRP (XRP) In Leu Romania (RON) qiimaha sicirka
Sicirada sarrifka lacagaha oo casriyey 19/01/2020 00:11
XRP In Leu Romania qiimaha dhabta ah, qiimaha sarrifka online on suuqyada lacagaha suuqyada.
XRP qiime ahaan Leu Romania maanta 19 January 2020
00:11:43 (cusbooneysiinta qiimaha ee 58 Seconds
1 XRP = 0.97 RON
1 RON = 1.03 XRP
Xariirka isweydaarsiga 'Cryptoratesxe.com' ee 1 XRP waxaad u baahan tahay inaad bixiso 0.97 Leu Romania). XRP qiimahoodu Leu Romania iyadoo la beddelayo 30-sekan kasta. Cusboonaysiinta ugu yar ee heerka sarrifka qadka ee laga helo isweydaarsiga sarrifka 'Cryptoratesxe.com'. Islamarkiiba XRP sicirka sarrifka.
XRP In Leu Romania shaxda ku nool 19 January 2020
Adeegso shaxda sarrifka ee XRP to Leu Romania dusheeda 19 January 2020. Si si wax ku ool ah loola socdo heerka sarrifka ee Cryptoratesxe.com, waxaan ku tusinaa jaantus. Garaafku wuxuu isla markaaba muujinayaa karti darida XRP ee ku Leu Romania. The XRP garaafka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, maaddaama bartayada ay xogta ka hesho Cryptoratesxe.com
Beddelaan XRP In Leu Romania
XRP (XRP) In Leu Romania (RON) Heerka Sarrifka
XRP (XRP) In Leu Romania (RON) shaxda qiimaha taariikhda
XRP ganacsiga ku noolaanshaha dhabta ah ee dhabta ah Leu Romania xilligan
Daqiiqad kasta waxaan raadraacnaa heerka sarrifka. XRP wuxuu kacay 0.0008 RON daqiiqadii ugu dambeysay. Shaxdu waxay tuseysaa XRP si Leu Romania daqiiqad kasta. Way ku habboon tahay in la isbarbar dhigo isbeddelada daqiiqad kasta.
0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
XRP ganacsiga ku noolaanshaha dhabta ah ee dhabta ah Leu Romania ganacsiga saacadihii la soo dhaafay
Taariikhda XRP ilaa Leu Romania saacad kasta. Kobaca XRP (XRP) illaa Leu Romania saacaddan waa - 0.0028 RON. Goobtu waxay muujineysaa miis loogu talagalay soo dhejinta 10 saacadood ee XRP ee ku Leu Romania saacad kasta. Ku dhajinta ku habboon macluumaadka ee heerka saacadda goobta.
0.97 0.98 0.97 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
XRP ganacsiga ku noolaanshaha dhabta ah ee dhabta ah Leu Romania arrimuhu maanta 19 January 2020
0.97 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95